14 Hunhu hweMunhu Akachengetedzwa - Blog
14 Hunhu hweMunhu Akachengetedzwa
Kuva wakachengetedzwa zvinongoreva kuti unonyara uye Introver , rudyi?
Iko kusanzwisisika kwakajairika kuti ivo vakafanana chinhu.
Saka, chii chinoita kuti mumwe munhu agare, saka?
Heino nzwisiso mune mamwe ehunhu chaihwo hwevanhu vakachengetedzwa, kunyangwe iwe uri wega kana kuziva mumwe munhu ariko.
1. Kudzikama Uye Kuunganidzwa
Kuva wakadzikama hunhu hwakajairika pakati peavo vanonyanya kusununguka.
Izvi hazvireve kuti hapana chinovashusha ivo vanongo gadzirisa zvinhu zvakasiyana.
Vanhu vakachengetedzwa vanowanzounganidzwa. Ivo vanotora nguva yavo nezvinhu uye havamhanyire mune manzwiro kana zviito.
Izvo zvakaoma zvakaoma kuvamisikidza, sezvo ivo vasingatombo funge kuita nharo kana kuita hasha.
kana mukomana ari pachokwadi nezvako
2. Dzimwe nguva Kunyara
Hongu, isu takati havazi vese vanochengeterwa vanonyara vanozivisa, asi ndizvo unokwanisa kuva hunhu hunhu!
Vamwe vanhu vakachengetedzeka ndizvo zvavari nekuti havana kunyanyisa kuvimba.
Kubata zvishoma zvingaite kuti zvive zvakaoma kusangana neshamwari uye kushamwaridzana, izvo zvinogona kugogodza-zvinoitika maererano nekwavo-kwekusimbisa.
Kushamwaridzana kunogona kuve kunonetsa kune vazhinji vanhu vane zvimwe zvakachengetedzwa hunhu, saka ushamwari hwepedyo nevanhu vavanovimba vanowanzo koshesa zvakawanda.
3. Yakagadzikana Mumanzwiro
Munhu akachengetedzwa haazoburitsa mbichana mbichana pamberi pevanhu kana kuve inoshamisa. Vanowanzo kuve vanokwanisa kwazvo maererano nekugadzirisa manzwiro avo.
Ivo vanoona zviri nyore kugara mukutonga kwekuti ivo vanonzwa sei, zvinoreva kuti ivo vanowanzo kuve vakanaka kwazvo mukuchengetedza kutsiga, kugadzikana kwemanzwiro.
Panzvimbo pekukwirira uye kureba kwevanhu vanobuda uye vane simba, vanhu vakachengetedzwa vanogona kuchengeta zvinhu zvakanaka uye zvakaenzana.
Izvo zvinogona kunyatso kuzvipa kune akawanda maficha ehupenyu hwavo, izvo zvatinozoenda mune zvakadzama nezve zvakazotevera…
Zvekare, hunhu uhwu hunosiyana pakati pevanhu, asi vanhu vazhinji vakachengetedzwa vanozviriritira.
Izvi zvinonyatso batanidza kune yapfuura poindi nezve kugona kugona kwavo kunetseka ivo vega.
Ivo vanowanzo bata nezvedu nyaya, pane kutsvaga rubatsiro kubva kune vamwe .
Izvi zvinogona zvakare kududzira muhupenyu hwavo hwebasa uye hukama, sezvavanobata pamutambo uye vanongoenderera nekuzvitarisira ivo pachavo.
Kuzvimiririra zvinoreva kuti havatsamiri pazhinji dzekushamwaridzana, sezvataurwa pamusoro apa, kuti vanzwe kugutsikana.
5. Nakidzwa wega Nguva
Kuchengetwa hazvireve kuti munhu anovenga kushamwaridzana, asi zvinogona kuita kuti zviome.
Vazhinji vakachengetedzwa vanhu vanosarudza kushandisa nguva yavo vega. Nenzira iyo, zvese zviri pamitemo yavo, hapana chinhu chisingatarisirwe chinogona kuitika, uye ivo vari mukutonga.
Izvi zvakakosha kwavari, sezvo vasingafarire kumanikidzwa kana zvinhu zvisingafungidzike zvekushamwaridzana.
Kugadzikana iwe pachako hunhu hunokosha kuva nahwo, uye zvinobatsira kuvaka hwaro hwakakura hwebasa, hupenyu hwehukama, uye hukama.
andre iyo hofori hondo yehumambo 2018
6. Vakadzika Kufunga
Sezvambotaurwa pamusoro apa, vanhu vakachengetedzwa havakonzeri mutambo. Kana ivo havadaro inoda kutariswa kwakawanda .
Nekuti ivo vakagarika pachavo, vanogona kushandisa maawa nemaawa vachifunga nezve zvinhu vasingazive kuti nguva yaenda kupi!
Izvi zvinoreva kuti ivo vanofunga zvakadzama - vanogona Zvitore kure zvakakwana kubva kune chero mutambo uye manzwiro ekusvika pane zviri kunyatso kuitika kune iyo yakakonzera iyo nyaya.
Uku kuzviziva kunogona kuvabatsira kuti vaone zvinhu nenzira dzakasiyana uye vanogona kunyatsochera zvakadzika.
Iko kugona kwekufunga zvakajeka uye kuongorora zvakadzama kupfuura kungoita pamusoro-chikamu hunyanzvi hunoshamisa kuve nahwo!
7. Anonzwira tsitsi
Vanhu vazhinji vanochengetwa vanoita shamwari dzinoshamisa.
Kugona kutora nhanho kumashure uye kuongorora mamiriro acho ari kure (pasina kumberi uye pakati mune chero mutambo) zvinoreva kuti vanogona kuona zvinhu zvakajeka kupfuura izvo zvakanangana zvakananga.
Sezvo vakadaro, vanogona iva netsitsi zvisingaite uye kunzwisisa, sezvavanogona kuona ins nekubuda kwekudyidzana uye mamiriro.
Muchokwadi, shamwari yako yakachengetedzwa inogona kuona kuti wakatsamwa usati watomboziva!
Kugona kwavo kuzviswededza padyo kunogona, oddly, kuvaita kuti vanzwe kutosvika padhuze newe.
Ungaita Sei Kuti Uve Asinganzwisisike Anonzwisisa
Ungaita Sei Kuti Ugare Wakanaka Mune Rako Ganda
Sei Kuti Usatore Mamwe Mashoko Evanhu Nezviito Pachako
Chimiro hachisi chimwe chinhu chakachengeterwa vanhu kutsvaga - zvachose!
Hazvirevi kuti havadi kubvumwa kana kukosheswa, kungoti ivo vangangodaro vasina hanya zvakanyanya yakanangwa kwavari.
Kuve wakachengeterwa kazhinji kunoreva kuve kure zvishoma kubva pachiitiko chikuru. Izvo izvi zvinogona kuita kuti vanhu vakachengetedzwa vanzwisise uye vaunganidzwe.
Nekubatirira pane kutariswa uye kutarisa kune chinangwa, kugara mumumvuri kunoita vanhu vakachengetedzwa ivo vanhu vane simba zvavari.
Nekuti ivo vanoedza kunzvenga mutambo, vanhu vakachengeterwa vane kudzikama kwatakambotaura nezvako kare.
Isu takataura kugadzikana kwepamoyo, asi inogona kushanda kune ese mativi ehupenyu, chaizvo.
Nekusaita nekukasira kana kusafunga sezvinoita vamwe vanhu, vanozvipa iwo mukana wekuti vawirirane.
Ivo havanyanye kushushikana zvakanyanya neshanduko mumamiriro ezvinhu nekuti ivo vakatombodzora kubva pazviri zvakadaro.
Izvi zvinoreva kuti ivo vakanakira kushanda kusvika kumazuva ekupedzisira sezvo ivo vasinganzwe kumanikidzwa senge vamwe vanhu vazhinji havawanzo kukurirwa.
Iwo mwero wekuzvidzora pamusoro pavo unovabatsira kuchengetedza kutsiga kwebasa-hupenyu hupenyu uye ivo vanongoenderera nazvo.
Zvekare, vanhu vazhinji vane hunhu hwakachengetwa vanounganidzwa kwazvo uye vasingaitise basa.
Izvi zvinovaita kuti vave nyore-kuenda sezvo ivo vasina kukanganiswa zvakanyanya nenharaunda yavo kana nehunhu hwevamwe vanhu.
Kuva nedaro iro kunoreva kuti vanogona kubata nezvinhu mune zvimwe akasununguka maitiro .
Ivo havawani sekudyara kwepfungwa kana kusungirirwa, izvo zvinoita kuti zvinhu zvakawanda zvive nyore kwazvo kwavari kubata nazvo.
Zvishoma zvaunovimba nevamwe vanhu kana mamiriro ezvinhu kuti uone manzwiro aunoita, zvakanyanya kudzikira uye kupusa-kuenda kwaunogona kuve muhupenyu.
Ichi ndicho chinhu chatinogona kudzidza tese kubva kune vanhu vakachengetedzwa muhupenyu hwedu…
11. Kuwedzera Kuonga
Kuve unokoshesa hunhu hwakakura kuve nahwo, uye chimwe chinhu vazhinji vedu vangangoda kushandira!
Kuva wakachengeterwa hazvireve kusasangana nezvinhu zvinoreva kuti zvese zvishoma zvinoremedza.
Nekuda kweizvozvo, zvinhu zvakawanda zvinotonyanya kunakidza.
Tarisiro kana kumanikidza zvinowanzoita kunge zvakadzikira - vanhu vakachengetedzwa havana kukwira zvakanyanya pazvinhu (sekutarisira kuti munhu wavari kufambidzana naye anopedzisira ave 'iye') saka ivo vanongotora zvinhu izvo zvavari uye vanoshandisa zvakanyanya ivo.
Ivo zvakare vanofungisisa nekuti vanogona kudududza vachiongorora zviri kuitika, zvinovabatsira kunakidzwa nenguva zvakanyanya pane kumhanyisa zviitiko kana kuramba vachidzingirira mufaro wepfupi-unotevera.
12. Vanofunga, Kwete Vanoita
Izvi hazvireve kuti vanhu vane hunhu hwakachengetedzwa vari pusa kana kufinha, zvinongobatanidza kudzokera kune zvataitaura pamusoro pekuunganidzwa uye kudzika!
Rudzi rwemunhu uyu anoshandisa nguva yakawanda achifungidzira kuti zvinhu zvingave sei kana kuronga zvinhu kunze.
Chokwadi, vanogona kuzoteedzera dzimwe nguva, asi kuzhinji kwekugutsikana kunouya kubva mukufunga zvinhu pamusoro.
Vanhu vakachengetedzwa havanzwe kudiwa kwekukurumidza kuita chiito kana kutanga chirongwa chitsva pasina - vanotora nguva yekufunga kuti zvii zvakanaka nezvazvinoreva.
Izvi zvinovabatsira kuti vawedzere kutenderera uye kusagadzikana mune zvese.
13. Chitarisiko Chekuchengetedza
Munhu akachengetedzwa haanzwe kudiwa kwekudaidzira nezvavari, uye izvi zvinoratidzwa nenzira yavanotaridzika.
Ivo havawanzo kupfeka kumira pachena - ivo havadi iyo yakawedzerwa kutarisisa izvo zvinogona kuunza.
Ivo vanochengetedza zvakanyanya mukusarudza kwavo hembe, magadzirirwo ebvudzi, uye zvigadzirwa, uye vanowanzo sarudza nyaradzo kupfuura zvimwe zvese.
Kuonekwa kwavo kwese kunoratidzira hunhu hwavo hwepasi.
14. Chengetai Opinion KwaVo
Dzakachengetedzwa mhando dzehunhu dzinodzivisa kutaura kwavo maonero pamusoro pezvinhu kunze kwekunge zvanyatso kubvunzwa.
sign ur ex inoda iwe kudzoka
Ivo kuremekedza kodzero dzevamwe kuva nemaonero akasiyana uye havabate vanhu zvisina kunaka kana zvakasiyana nekuda kwekuti vanopikisa pane zvimwe zvinhu.
Kunyangwe pavakabvunzwa, vanotaura mhinduro dzavo nenzira yekuti vasamanikidze maonero avo kune vamwe, kana kuita kuti vamwe vanzwe vakashata kana kutadza maonero avo.
Ivo vezvematongerwo enyika uye vanoita runyararo, vachitsvaga kutsvaga pasi rakagovaniswa pane kungo tarisa pamisiyano.
Ndinovimba izvi zvakakupa zvimwe zvekunzwisisa uye kunzwisisa kwepasirese kwevanhu vakachengetedzwa!
Kana mumwe munhu wauri padyo naye achida kubva kure nekuremekedzwa kana kudzivisa kushamwaridzana, iwe unogona ikozvino kugona kuona kuti sei uye usanzwa kudiwa kwekuvamanikidza mune chero chinhu.
Usakanganwe - nekuda kwekuti ivo havasi padanho repamusoro, hazvireve kuti havana huwandu hukuru hwematarenda anoshamisa!
zvinorevei kudanana nemunhu
zvikonzero zvekuchengeta hukama hwakavanzika
kurira zvine hungwaru kana uchitaura
ibwe rinotonhora steve austin makotesheni
jeff kushinga kushanduka kwekupedzisira